नेपालको विश्वकप र एसिया कप छनोटका घरेलु खेलहरु फेरी स्थगित – Talking Sports
नेपालको विश्वकप र एसिया कप छनोटका घरेलु खेलहरु फेरी स्थगित
फिफा र एसियन फुटबल महासंघ (एएफसी) ले कोरोना भाईरसको बड्दो सक्रमणका कारण अक्टोबर र नोभेम्बरमा हुने तय भएका विश्वकप छनोटका खेलहरु २०२१ सम्मका लागि स्थगित गरेको छ।
मार्चको लागि दसरथ रङशलामा खेल्नका लागि तय भएको चाइनिज ताइपेइ र अष्ट्रेलियासँग खेल कोरोना भाईरसका कारण हुन नसके पछि नयाँ मिती प्रस्ताव गरेको थियो। महामारी नाथामिए पछि फिफा र एसियाली फुटबल महासंघले अर्को वर्षको लागि सबै खेलहरु स्थगित गरेको अन्तरास्ट्रिय संचार माध्यम रोयटर्सले जनाएको छ।
एसियन फुटबल कन्फेडेरेशन र फिफाले नयाँ तालिका प्रस्ताव गर्दा नेपालको चाइनिज ताइपेइबिरुद्धको खेल असोज २२ र अष्ट्रेलियाबिरुद्धको खेल असोज २७ गते हुने बताएको थियो । यस्तै जोर्डनबिरुद्धको अन्तिम होम म्याच कार्तिक २७ गतेका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । कोरोना भाइरसको महामारी कायमै रहे अथवा नेपालमा मात्रै यसको कारण खेल गराउन सम्भव नरहे एएफसीले कि त नयाँ मिति तय गर्ने वा अर्को बिकल्प खोज्ने एएफसीले पहिलेनै जनाएको थियो।
एट्लान्टाले च्याम्पियन्स लिग जितेको खण्डमा डे रुनले समर्थकलाई पिज्जा खुवाउने
मेस्सीलाई रोक्न बायर्नको बिशेष रणनीति
‘फलन जायन्ट्स’ को एल क्लासिकोमा बर्तमान र भविष्य पस्कदै बार्सा र रियल
अन्सु फातीको नयाँ सम्झौता र आइतबार रियल म्याड्रिडबिरुद्धको एल क्लासिको का लागि एक ढुँगा हुन बार्सिलोनाका खेलाडीहरु बुधबार अबेर एक क्याटल रेस्टुरेन्टमा जमघटमा थिए ।
१८ बर्षिय फातीले क्लबका लागि अर्को ६ बर्षको प्रतिबद्धता जनाउनले बार्सिलोनाका लागि ठूलो महत्व राख्छ । धेरै समस्याको सामना गर्दै गर्दा बिश्व फुटबलका सबैभन्दा आशालाग्दा प्रतिभाले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्दा अब आउने पुस्ताको लागि उनी लिडर हुने तर्फ इंगित गरेको छ ।
तर अहिलेको लागि क्याम्प नोउमा रियलसँग भिड्नु अघि बार्सिलोनालाई टिममा एकता सबैभन्दा आवश्यक छ ।
ला लिगामा भ्यालेन्सिया र च्याम्पियन्स लिगमा डाइनामो किभलाई हराएको बार्सिलोनालाई एल क्लासिको पनि जित हात पार्दै निकै राम्रो साता बनाउदै आफ्नो लयलाई फर्काउनु छ ।
बर्तमानलाई दिशा दिदै भविष्यको पालन पोषणको आधार बनाउन कडी यस पटकको एल क्लासिको बनेको छ । दुई ऐतिहासिक क्लबबीचको भेटमा दुवै रणनीति बनाउने तथा मर्मत र यही खेलबाट पुर्नसंरचनामामा लाग्दै वर्तमान अवस्थामा पानी माथि तैरिने प्रयास दुवै क्लबको रहनेछ ।
गत गर्मीमा त्यही रेस्टुरेन्टमा बार्सिलोनाका अध्यक्ष योआन लापोर्टा र प्रशिक्षक रोनाल्ड कोमनबीच भविष्यका बिषयमा छलफल भएको थियो । लापोर्टाले प्रशिक्षकको रुपमा कोमनको भविष्य निर्णय गर्न दुई साता लाग्ने भन्दा उनले अर्का प्रशिक्षक खोजिरहेको रुपमा बुझिएको थियो ।
तर कोही नपाएपछि, अथवा क्याम्प नोउमामा ल्याउन असफल हुँदा कोमन र बार्साबीचको सम्बन्ध यत्तिकै अगाडी बढीरहेको छ ।
कोमनको बिपरित आइतबार टचलाइनमा उभिनेछन् कार्लो एन्सेलोट्टी जसको यो सिजनको नियुक्तिले सबैलाई अचम्ममा पारेको थियो । सफल तर पुरानो पुस्तासँग बफादार रहेका जिनेदिन जिदानको बहिर्गमनपछि रियलले परिवर्तनलाई सही ढँगले आत्मसात गर्ने ठूलो भिजन भएका प्रशिक्षक ल्याउने अनुमान गरिएको थियो ।
तर रियल अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेजले २०१३ देखि २०१५ सम्म क्लबलाई सम्हालिसकेका एन्सेलोट्टी रोजे । तर यसको अर्थ कोमन र एन्सेलोट्टीले युवा पुस्तालाई आत्मसात गर्न नसकेको भनिएको भने होइन ।
पेद्री, गाभी, निको गोन्जालेज, रोनाल्ड अरौजो र सर्जिनो डेस्ट जस्ता आशा लाग्दा युवा खेलाडीहरुलाई कोमनले बार्सिलोनामा राम्रो बढावा दिएका छन् । एन्सेलोट्टीले मिग्वेल गुटिरेजलाई लेफ्ट ब्याक र एडुवार्डो कामाभिँगालाई मिडफिल्डमा बिश्वास गरेका छन् ।
२१ बर्षिय ब्राजिलियन भिनिसियस जुनियरले २०१८ मा रियलका लागि डेब्यु गरेका थिए तर उनको खेल एन्सेलोट्टीको उपस्थितिमा परिपक्व बन्न थालेको छ ।
पेरिस सेन्ट जमाईन रोजेका डच कप्तान जर्जिन्हो वाइनाल्डमलाई बार्सिलोना भित्र्याउन कोमन सफल भएको भए गाभीले अवसर पाउने थिएनन् । फर्लाण्ड मेण्डीको चोटका कारण मिग्वेलले रियलमा राम्रो एक्सपोजर पाएका हुन् ।
स्पेनका दुवै महारथी क्लबमा ओल्ड गार्ड प्रतिको बफादारिता अझै पनि कायमै छ । ३४ बर्षिय जेरार्ड पिके अझै पनि बार्साका महत्वपूर्ण डिफेण्डर हुन् भने ३६ बर्षका लुका मोड्रिच रियलका उत्कृष्ट प्लेमेकर ।
आइतबारको परिणाम फरक पुस्ताहरुको समिश्रणमा बनेको दुई टोलीको हुनेछ ।
१७ बर्षिय गाभी उनीभन्दा १६ बर्ष जेठा सर्जियो बुस्केट्ससँग खेल्न सक्छन् भने २० बर्षका रोद्रिगोले ३३ बर्षिय करिम बेन्जेमासँग जोडी बनाउन सक्छन् ।
लियोनल मेस्सी र क्रिष्चियानो रोनाल्डोले छोडी सकेपछि ला लिगाले स्पेनिस फुटबललाई बिश्वको नयाँ प्रतिभाको फ्याक्टरीको बिम्बको रुपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । ठूलो ब्राण्ड भ्याल्यु भएको एल क्लासिकोलाई भविष्य देखाउने झ्यालको रुपमा हेरिएको छ ।
ट्विटरमा ला लिगाको आधिकारिक ह्याण्डलले बिहिबार एक प्रश्न सोध्योः “तपाई एल क्लासिकोमा कुन टिनेज स्टारलाई हेर्नका लागि उत्सुक हुनुहुन्छ ?”
हो कुन टिने जस्टार । ला लिगासँग अहिले रोनाल्डो र मेस्सी छैन । त्यसैले उसले भविष्य प्रबद्र्धन गर्दैछ ।
ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकपमा भारत र पाकिस्तान बीचका चर्चित भिडन्तहरु
ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकपको सुपर १२ शनिबारबाट सुरु भएको छ । यस वर्षको ट्वान्टी ट्वान्टीको समुह विभाजन सुरु भएबाट नै चीरप्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तान बीचको खेलको चर्चा सुरु भएको थियो । यी दुई चीरप्रतिद्वन्द्वी यस वर्षको ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप अन्तर्गत आइतबारको दोश्रो खेलमा आमने सामने हुँदै छन् ।
भारत र पाकिस्तान बीच ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकपमा भएका केही चर्चित भिडन्तको चर्चा गर्दैछौँ ।
३. २०१६, समुह चरण
२०१६ मा आफ्नै घरेलु मैदानमा आयोजना भएको ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकपको सुपर १० को पहिलो खेलमा १२७ रनको सानो लक्ष्य पक्ष्याएको भारतले न्युजिल्याण्डसँग ४७ रनको लज्जास्पद हारको सामना गर्यो ।
पहिलो खेलमा खराब प्रदर्शन गरेको भारतले आफ्नो दोश्रो खेलमा पाकिस्तानको सामना गर्दै थियो । पाकिस्तानले भने आफ्नो पहिलो खेलमा बंगलादेशलाई ५५ रनले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो ।
वर्षाका कारण १८ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा भारतले टस जित्यो र पहिले बलिङ गर्ने निर्णय गर्यो । भारतले पाकिस्तानलाई १८ ओभरमा पाँच विकेटको नोक्सानीमा ११८ मा रोक्न सफल हुँदा पहिले बलिङ आफ्नो निर्णय ठिक भएको साबित गर्यो ।
११९ रनको झिनो लक्ष्य सहित ब्याटिङमा उत्रिएको भारतले निकै खराब सुरुवात गर्दा पाँच ओभरमा २३–३ को अवस्थामा खुम्चिन पुग्यो । विश्वकपको इतिहासमा भारत विरुद्ध जित दर्ता गर्न नसकेको पाकिस्तानको पहिलो जितमा तगारो बने बिराट कोहली ।
३७ बलको सामना गरेका कोहलीले सात चौका र एक छक्का प्रहार गर्दा पाकिस्तानको भारत माथि जित निकाल्ने आशामा फेरी पनि अर्को एक पटक तुसारोपात लाग्न पुग्यो ।
२. २००७, समुह चरण
नयाँ ढाँचाको खेल र पहिलो विश्वकप । चर्चित अनुहार कप्तान राहुल द्रविड, सचिन तेन्दुलकर र सौरभ गांगुली बिना विश्वकप खेल्न पुगेको भारतको लागि नयाँ कप्तान थिए महेन्द्र सिंह धोनी ।
एकदिवसीय विश्वकपमा भारतलाई एक पटक पनि पराजित गर्न नसकेको पाकिस्तान पहिलो पटक आयोजना भएको ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकपमा नै भए पनि पराजित गर्ने आशा फेरी पनि आशामा नै सीमित हुन पुग्यो ।
खेलमा टस जितेर पाकिस्तानले भारतलाई ब्याटिङ गर्न लगायो । मोहम्मद आसिफले घातक बलिङ गर्दै चार विकेट हात पार्दा सुरुवात राम्रो गर्न नसकेको भारतले रबिन उथप्पाको अर्धशतक र धोनीको ३३ रनमा ९ विकेट गुमाएर १४१ रन बनायो ।
१४२ रनको लक्ष्य सहित जबाफी ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले पुरै २० ओभर खेल्दै ७ विकेट गुमाएर १४१ रन मात्र बनाउन सक्दा खेल बराबरीमा टुंगियो ।
अहिले ट्वान्टी ट्वान्टीमा खेल बराबरीमा टुंगिएको खण्डमा सुपर ओभरको आयोजना हुन्छ । तर त्यस समयमा बल–आउटको नियम थियो । बलरहरुले खाली स्टम्पमा लगाउन पर्ने हुन्थ्यो र पाँच पटकमा जुन टोलीले बढी पटक स्टम्पमा लगाउन सक्यो उसैले जित हात पार्दथ्यो । भारतले बल आउटमा पाकिस्तानलाई ३–० ले हरायो ।
१. २००७, फाइनल
पहिलो पटक आयोजना भएको ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप र फाइनल खेल्दै थिए भारत र पाकिस्तान । खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले ओपनर गौतम गम्भिरको ७५ तथा छैटौँ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका रोहित शर्माले १६ बलमा बनाएको ३० रनको मद्दतमा ५ विकेट गुमाउदै १५७ रन बनायो ।
१५८ रनको लक्ष्य सहित ब्याटिङमा आएको पाकिस्तानले ओपनर मोहम्मद हफिजलाई एक तथा विकेट किपर कम्रान अकमललाई शुन्य रनमा गुमाएर खराब सुरुवात गरे पनि अर्का ओपनर इमरान नजिरले १४ बलमा ३३ तथा युनिस खानले २४ रन जोड्दै आफ्नो पारी सम्हाल्यो ।
तर दुबैको विकेटको पतन पछि हार तर्फ लम्के पनि मिस्बाह–उल–हकले एक छेउ सम्हाल्दै पाकिस्तानलाई जित नजिक पुर्याए । विश्वकप उचाल्न अन्तिम ओभरमा पाकिस्तानलाई १३ रन आवश्यकता थियो ।
मिस्बाहले दोश्रो बलमा जोगिन्दर शर्मालाई छक्का प्रहार गर्दै पाकिस्तानलाई अन्तिम चार बलमा छ रनको अवस्था सम्म पुर्याए । तर त्यस पछिको बलमा ४३ रन बनाएका मिस्बाह आउट हुँदा पाकिस्तानले खेल पाँच रनले हार्यो भने भारतले ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप उचाल्यो ।
माउरिन्होको प्रशिक्षण करिअरकै लज्जास्पद हार
होजे माउरिन्होले आफ्नो प्रशिक्षण करिअरकै सबैभन्दा लज्जास्पद हार मध्येको एक व्यहोर्दा इटालिया क्लब एएस रोमा युरोपा कन्फेरेन्स लिगमा नर्वेको बोडोरग्लिम्टसँग ६–१ ले पराजित भएको छ ।
पहिलो हाफमा २–१ ले मात्र पछि पर्दा बोडोका लागि एरिक बोथेम र प्याट्रिक बर्गले गोल गरेका थिए भने कार्लेस पेरेजले रोमाका लागि एक गोल फर्काएका थिए । बोथेमले दोश्रो र टिमको लागि तेश्रो गोल गर्दा माउरिहाले दोश्रो हाफको शुरुवातमा तीन र एक घण्टा बितेपछि दुई परिवर्तन गरेका थिए ।
ओला सोल्बाकेनले एकल प्रयासमा उत्कृष्ट चौथो गोल गरे भने अमाल पेलेग्रिनोले पाचौं र सोल्बाकेनले आफ्नो दोश्रो गोल गर्दै रोमालाई लज्जास्पद हारको स्वाद चखाए ।
माउरिहोको टोलीले उनि प्रशिक्षक रहँदाको १ हजार ८ औं खेलमा ६ गोल खान पुगेको हो । माउरिन्होका लागि यसअघिको सबैभन्दा ठूलो हार २०१० मा थियो जबको उनको टोली रियल म्याड्रिडले बार्सिलोनासँग ५–० को नराम्रो हार व्यहोरेको थियो ।
“मैले यो लाइन अप लिएर खेल्ने निर्णय लिएको थिए, त्यसैले यो हारको जिम्मेवारी मेरो हो । मैले राम्रो मनसायले नै यो गरेको हो । म कडा मिहिनेत गर्नेहरुलाई अवसर दिन चाहन्थे । हामीसँग माात्र १३ खेलाडी छन् जसले रोमाको लागि राम्रो गर्न सक्छन्, अरु खेलाडी यो स्तरमा छैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई पनि बिश्राम दिन आवश्यक थियो,” उनले भने ।
माउरिन्होकै पुर्व क्लब टोटेन्ह्याम हट्स्परले पनि समुह जीमा डच टोली भिटेसेसँग १–० को अस्वभाविक हार व्यहोर्यो । यद्दपि स्पर्स व्यवस्थापक नुनो इस्पिरितो सान्चेजले खेलका लागि ह्यारी केन, सन हिउँग मिन र ह्युगो लारिस लगायतका खेलाडीहरुलाई नलिएरै नेदरल्याण्ड्स गएका थिए ।
T20 World Cup 20212 hours ago
ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप – असलंका र राजापक्षाको अर्धशतकमा बंगलादेश माथि श्रीलंकाको सहज जित
T20 World Cup 202112 hours ago
भारतलाई हराउन सफल हुने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको विश्वास
ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप : भारतलाई पराजित गरेमा पाकिस्तानी खेलाडीहरुले ठुलो बोनस पाउने
T20 World Cup 202123 hours ago
ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप : डिफेन्डिङ च्याम्पियन वेष्ट इन्डिजको लज्जास्पद हार
T20 World Cup 20211 day ago
ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप : डिफेन्डिङ च्याम्पियन वेष्ट इन्डिज इंगल्याण्डबिरुद्ध ५५ रनमै अल आउट
ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप : सुपर १२ को पहिलो खेलमा अष्ट्रेलियाको संघर्षपूर्ण जित
T20 World Cup 20212 days ago
ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप : नेदरल्यानण्ड्सको लज्जास्पद हार, श्रीलंका समुह विजेता बन्दै सुपर १२ मा
ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप : आयरल्याण्डलाई स्तब्ध पार्दै नामिबिया सुपर १२ मा
अब्दुल्लाहको ‘टचलाइन एन्टिक्स’
म्यानचेस्टर युनाइटेड एस्टन भिल्लासँग स्तब्ध, चेल्सीलाई सिटीले हरायो
साफ च्याम्पियनसिपः नेपाललाई पहिलो फाइनल पुग्ने बलियो आधार
भैरहवाको पहिलो जित, बिराटनगर ६ विकेटले पराजित
ललितपुरको पहिलो जित, बिराटनगर लगभग बाहिरियो
माल्दिभ्सबाट अब्दुल्लाहको मिसाइल । किन आक्रमक भए मिडियासँग ?
‘हामीले ट्रफि जितिसकेका छैनौं, नेपालमा प्लिज सबैजना शान्त रहनुहोला’
गिलो मैदानका कारण अर्को खेल पनि हुन सकेन, दुई खेलको लागि नयाँ मिति